warkii.com » Power Star Pawan Kalyan oo qiironaayo ayaa baraha bulshada soo galay isagoo warqad usoo diray Amtabh Bachchan waxuuna banaanka so dhigay jaceylku Big B uqabay!!
Power Star Pawan Kalyan oo qiironaayo ayaa baraha bulshada soo galay isagoo warqad usoo diray Amtabh Bachchan waxuuna banaanka so dhigay jaceylku Big B uqabay!!
Pawan Kalyan waxuu kamid yahay xidigaha ugu caansan koonfur India iyo guud ahaan fanka hindiya waana jilaa ay walaalo yihiin Mega Star-ka weyn Chiranjeevi hadaba Pawan aya aad oga murugooday kana qiiroday warka ah Amitabh Bachchan ayaa Coronavirus kudhacay.
Waxaa la isku raacay in Amitabh Yahay Goat-ka kowaad ee Bollywoodka (Greatest of All Time Actor) waa jilaa ay ku aftirsadaan dhamaan jiilkiisa wixii ka dambeeya atoore walbaana Amit oo kale inuu noqdo ayuu ku riyoon jiray hadaba Bachchan oo isbitaal Corona uyaalo shaqsi walbo taageero ma ahan war uu ku farxaayo.
Pawan waxuu kamid yahay taageerayaasha dhabta ah ee Amit waliba kuwa loo yaqaan Die-Hard-Fan hadaba warqadii uu soo soqoray isagoo qiireysan sida tan ayee ahed:
“Kusocoto mudane Amitabh Bachchan oo ah shaqsi aan aad ujeclahay aadna u xushmeeyo:”!! “Wali waan xusuusta sida aniga iyo qoyskeyga oo ay kujireen hooyadey iyo aabahey aan oga murugoonay kuuguna so duceynay dhaawacii kaaso gaaray duubista Filimka Coolie (1983) jiil walbana waxaad ka kasbatay jaceyl, daacadnimo iyo adiga oo ahaa aof karti badan jaceyl iyo dareen dhab ahna leh.”
“Waan ku jecelnahay kaliya kuguma jeclaanin xirfadaada jiliin ee sido kale waxaa tahay geesi karti badan oo nolosha la dagaalo, tusaalaha nolosha, dhiirogaliye dhab ah iyo bini’aadanimo heer sare ah…dhab ahaanti aadbe ii xanuujisay markaan maqlay in Corona laga helay adiga iyo Abhishekji.”
“Si niyad ah ayaan kuugu so duceyna adiga iyo Abhishekji inaad deg deg kaga caafinaadaan caabuqa Corona” Warqad kaaga timid taageerahaada iyo qof kugu daydo nolosha in badan, Pawan Kalyan.